कक्षा ८ का दुई नाबालिकले स्कुलको कक्षा कोठामा गरे विवाह, भिडियो भयो भाइरल ! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /रोचक/कक्षा ८ का दुई नाबालिकले स्कुलको कक्षा कोठामा गरे विवाह, भिडियो भयो भाइरल !
महिला आयोगका सदस्यहरूले केटाका बाबुआमासँग कुरा गरेर उनलाई सल्लाह पनि दिए । उनले यो पनि भनिन् कि महिला आयोगले नाबालिका केटीको बस्ने व्यवस्था गर्नेछ । यसैबीच, राजमहेन्द्रवरामका प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान शुरू गरेको छ । प्रहरीले भन्यो, ‘हामी दुबै नाबालिक, उनीहरूको परिवार र कलेज प्रशासनको बयान लिनेछौं ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
जब अदालतले क्षतिपूर्तिको रकमको निर्णय गर्दछ, तब यसले पीडितले खर्च गरेको हरेक रकम गणना गर्नेछ, पीडितको मनोवैज्ञानिक परामर्श, उपचार, कानुनी खर्च, सम्पत्ति क्षति र त्यसमा ब्याज सम्म रहने जनाइएको छ । अपराध पछि, अनुसन्धान अधिकारीले ‘पीडितको हानी’ र ‘आरोपीको आर्थिक स्थिति’ पनि रेकर्ड गर्नुपर्नेछ ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **